Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China Fireproof Aluminom Composite Panel Chenyu
Ogwe ihe mejupụtara aluminom na -enweghị ọkụ bụ ụdị ihe eji achọ mma, nke nwere ọtụtụ uru na -enweghị atụ ma e jiri ya tụnyere ihe mkpuchi ọzọ. Ihe kpatara nke a bụ na ogwe ihe mejupụtara aluminom nwere ihe abụọ (ọla na nke na-abụghị ọla) nwere ihe dị iche iche kpamkpam. Ọ bụghị naanị na-ejigide njiri mara nke ihe akụrụngwa mbụ (aluminom metal, plastik polyethylene na-abụghị metal), kamakwa na-emeri adịghị ike nke ihe akụrụngwa mbụ.
1. Ọ nwere ọmarịcha nguzogide ọkụ na nkwụghachi azụ ire ọkụ, ma nwee ike gafee ọkwa mmanye nke mba GB8624 "usoro nhazi maka ịrụ ọkụ nke ihe ụlọ", na arụmọrụ ya adịghị ala karịa ọkwa B1;
2. Ike peel dị elu na ezigbo ihe eji arụ ọrụ, na -emezu ihe mba ụwa chọrọ GB / t17748 plastik plastik mejupụtara;
3. Usoro ihe bụ isi nwere mmegharị siri ike, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanwe ọnọdụ nhazi extrusion nke efere aluminom-plastik nkịtị, nke nwere ike izute ụzọ teknụzụ chọrọ nke usoro nrụpụta efere efere aluminom-plastik dị iche iche n'ụlọ na mba ọzọ;
4. Isi ihe nwere ezigbo ihe nkpuchi ikuku oxygen na -ekpo ọkụ ma nwee ike iguzogide oke na ala dị ala - 40 ℃ - + 80 ℃ maka okirikiri 20 na -enweghị mgbanwe;
5. Ihe na -egbochi ire ọkụ nke dị na isi ihe nwere nkwụsi ike dị mma, enweghị mbugharị na ọdịda, yana ezigbo ihu igwe, nke na -emeri ntụpọ nke ndị na -egbochi ọkụ halogen nkịtị nke na -anaghị eguzogide ọkụ ultraviolet, yabụ ọ dabara adaba maka ime ụlọ na n'èzí ihe owuwu ụlọ;
6. Isi ihe nke ngwaahịa a na -acha ọcha ma ọ bụ na -acha ntụ ntụ ọcha, enwere ike ịhazi ya na agba ndị ọzọ;
7. Isi ihe bụ ihe na-eme ka ọkụ na-adị mma na gburugburu na ihe dị ọcha, enweghị halogen na anwụrụ ọkụ dị ala. Ọ dị oke ike ọkụ. Olu anwụrụ ọkụ dị obere mgbe ọ na -ere ọkụ, ọ nweghịkwa anwụrụ ọkụ na anwụrụ ọkụ ojii. Ọ bụ enweghị mmetọ ma na-emezu ihe steeti chọrọ maka ihe owuwu ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nchekwa gburugburu.
Ọ dabara maka mgbidi ákwà mgbochi na ime ụlọ na n'èzí mma na akwa ọkụ chọrọ.
Ogwe ihe mejupụtara aluminom na -enweghị ọkụ nwere ezigbo ọnụahịa yana ngwa sara mbara. Enwere ike iji ya maka ịchọ mma nke ákwà mgbochi, mgbidi ime na mpụga, ebe obibi, ụlọ nri, ebe a na -ere ahịa, ụlọ ọgbakọ na ihe ndị ọzọ.
Ebe ọ bụ na ihe mejupụtara aluminom mejupụtara ihe abụọ (ọla na nke na-abụghị ọla) nwere ihe dị iche iche, ọ bụghị naanị na-ejigide njiri mara nke ihe mejupụtara ihe mbụ (aluminom ọla, plastik polyhexene na-abụghị metal), kamakwa na-emeri nke mbụ akụrụngwa akụrụngwa ezughi oke, wee nweta ọtụtụ ihe onwunwe mara mma.
1) Ebe a na-eli ozu na-eji akụrụngwa kemịkalụ dị elu na teknụzụ na-eji kemịkal na-emeso elu mkpuchi aluminom, na-akpụpụta ihe nkiri oxide mmanụ aenseụ dị elu n'elu eriri aluminom, ka agba na mkpuchi aluminom wee jikọta nke ọma na nke a. intermediary, ma nwee ezigbo adhesion. .
2) Mkpuchi ụlọ ọrụ ahụ na-anabata igwe mkpuchi mkpuchi ala nke atọ dị elu nke na-arụ ọrụ nke ọma na ọnọdụ mechiri emechi na enweghị ájá, nke mere na a na-achịkwa oke nke ihe mkpuchi mkpuchi na ịdị mma nke mkpuchi ahụ; a na -ekewa oven n'ime mpaghara anọ iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ na akpọọ nkụ.
Nke gara aga: Ogwe ihe mejupụtara Aluminium agbajiri agbaji
Osote: Art na -eche ihu ogwe ihe mejupụtara aluminom